Toro-hevitra momba ny fanofanana ITIL - Ny fototry ny ITIL - Sekoly Tech
Toro-hevitra momba ny fanofanana ITIL - Ny fototry ny ITIL
Toro-hevitra momba ny fanarahan'ny ITIL
Inona no atao hoe Certification ITIL
Ny Lifecycle Service Life
FOMBA FAMPIANARANA ITILY: Processes, Fomba
ITIL Core Component: Strategy Service
Asa Fanompoana ao amin'ny tolotra
ITIL Core Component: Design Service
ITIL Core Component: Transition Service
ITIL Core Component: Operation serivisy
ITIL Core Component: Fanatsarana ny fanompoana (CSI)
Ny fanamarinana ITIL dia heverina ho tsy azo antoka ny fepetra ao amin'ny Sampam-pitantanana IT amin'ny serivisy satria hita taratra amin'ny marika sy ny matihanina rehetra. Ireo izay manana ny mari-pahaizana ao amin'ny toeram-pivahinianany dia heverina ho azo ianteherana kokoa eo anivon'ny tafatafa amin'ny asa. Miaraka amin'ny ITIL, ny orinasa dia efa vonona ny handefa asa mahomby sy tsara ho an'ny mpanjifany amin'izao fotoana izao.
Ny rafitra dia manoritsoritra ny asany ary mametraka torolàlana ho an'ny manam-pahaizana tsirairay mba haka izany. Alohan'ny hanombohanao ny fahavononanao handray ny fanadinana momba ny fanana-maso ITIL, dia raisiny ho fantatra ny hevitra manan-danja, ny fomba fiasany ary ny fiantsoana ny mpiloka tsirairay mba hahazo antoka.
Ny ITIL dia mijanona ao amin'ny Tranomboky momba ny teknolojia fampiroboroboana ary ny rafitra dia manome fomba am-pelatanana izay ampiasaina betsaka amin'ny fampiasana IT Service Management, ny ITSM sy ny tolotra samihafa izay mikasa ny hanolotra tolotra mendrika ho an'ny mpanjifany sy ny mpanjifany. Ny antony manosika fototra amin'ny fahazoana mari-pankasitrahana dia ny hanomezana ireo orinasa fomba mahery vaika hanitarana ny ROI sy hampivelatra ny fizotry ny orinasa. Ny mpahay siansa azo antoka dia heverina ho mpanohitra mahomby hitarika ny fikambanana amin'ny fomba marina.
Ho an'ny mpampionona sy ny orinasa IT, ny ITIL dia voafaritra ho dimy kilasy voamarina, mba ho voatokana
Tetik'asa fanompoana ITIL
Tetezamita amin'ny tolotrasa ITIL
Fitaovana ampiasaina amin'ny ITIL
Tohizam-panompoana tsy tapaka ITIL
Amin'ny fotoana ifaneraserana ireo singa dimy rehetra ireo, dia mamolavola ny andrana ho an'ny serivisy izy ireo ary apetraka eo amin'ny sokajin-dàlana efa mialoha mba handraisana fepetra goavana amin'ny processeur. Ny fizarana dia manome fahafahana ny solontena handefa ilay asa ary hamita azy ireo amin'ny tranga iray manokana.
Ireo singa dimy voatanisa ao amin'ny ITIL dia tafiditra ao anatin'ireo drafitra samihafa sy ny fari-pahaizan'ny faritra araka ny fangatahan'ny orinasa iray. Izy ireo dia misaraka amin'ny sehatra fitantanana isan-karazany, ohatra, mandidy ny fangatahana, ny fitantanana limit, ny fitsaboana ary ny fitantanana ny zava-mitranga sy ny fitantanana ny hetsika amin'ny sokajy maro samihafa.
Ny sokajy tsirairay ao amin'ny sokajin'ny singa fototra dia misaraka amin'ny dingana samihafa na ny lahasa ho toy ny singa amin'ny rafitra ITIL.
Vakio ihany koa: Fanomanana ny fanadinana ITIL Foundation | FITSIPIKA MISY FREE ITIL Mock for Practice
Ny fepetra fanompoana stratejika dia manazava amin'ireo fomba fitsaboana izay mety hampitain'ny manam-pahaizana amin'ny famenoana tanteraka ny laharam-pahavelomana amin'ny fanompoana. Ny tetikady tsirairay natao dia tokony hifanaraka amin'izay ilain'ny mpanjifa sy ny tanjony lava.
Ny foto-kevitra fototra koa dia misaraka amin'ny faritra samihafa.
Fepetra momba ny fitantanana ny portfolio-service - Ny portfolio-service dia manolotra ny iray amin'ireo serivisy omen'ny fikambanana iray ary mifototra amin'ny singa telo voamarina - fantsom-panaovana ny serivisy, ny endriky ny serivisy sy ny tolotrasa nialana.
Mangataha ny fizotran'ny fitantanana - Ny fivoarana dia mitazona ny fahatakarana ny zavatra ilain'ny mpanjifa iray ary ny fiantraikany amin'ny fangatahana alàlana na asa. Ny fahatakarana ny mpanjifa sy ny famporisihana azy ireo hividy zavatra dia azo atao,
Tetik'asa mpanjifa - Manasokajy ny mpanjifa amin'ny ampahany samihafa ary mahatakatra ny fepetra takiany.
Ohatra amin'ny asa momba ny raharaham-barotra - Raha vantany vao nomena baiko ny mpanjifa dia fahafahana lehibe hisafoana ny fitondran-tenany sy ny fomba ahafahan'izy ireo mandray tombony amin'ny asa fitoriana.
Fepetra ara-bola ara-bola - Fandraiketam-bola ara-bola no mihevitra ny ampahany fototra ary ity fomba fijery ity dia mamela ny fikambanana iray mandoa ny karamany, manao drafitra ara-bola amin'ny fahitana ny rindrambain'ny ataon'ny mpanjifa sy ny famenoana ny mpanjifany na mpanjifa amin'ny fijerena ny vidin'ny asa sahanina hanomezana antoka fanompoana.
Ny fitaovana fitsinjaram-pahefana dia manana ny fiainany manokana voavonjy ary ireo singa tena izy dia fantatra amin'ny anarana hoe Design des Service Four. Izy ireo dia,
Olona - Ny HR notakiana hanao ny paikady
Fandrosoana - Ny fomba fitantanana ny serivisy izay ilaina amin'ny asa
Items - Ny fanavaozana fototra sy ny fitaovana ilaina mba hamitana azy
Fihetsiketsehana - Ireo mpomba ny mpanohana, ny vahiny dia tsy maintsy manohana hatrany amin'ny serivisy izay tsy afaka hiatrehana ny fikambanana.
Ny tanjona fototra amin'ny fampiasana ny fifindran'ny asa fanompoana dia ny fiantohana rehefa manangana rafitra vaovao ary alefa any amin'ny orinasa IT, fa tsy mifanaraka amin'ny fitsipika napetraky ny fikambanana.
Ny iray amin'ireo entana sy serivisy tafavory dia mifindrafindra amin'ny fomba azon'ny mpanjifa mahazo ny vokatr'izany faniriana izany. Miankina amin'ny fanaraha-maso tanteraka ny tombontsoa, ​​na fitaovana na fandaharana, fankatoavana ny fampiasana sy ny fampiasana.
Betsaka ny singa goavan'ity sokajy ity, anisan'izany,
Hanova ny fanombanana
Fitantanana ny tetik'asa (Fampivoarana drafitra sy fanohanana)
Fitantanam-pitondrana sy fanodinana
Fankatoavana sy fitsapana
Asa fampiasam-bola sy fitantanana
Ny Operation Service dia singa iray hafa amin'ny fanamafisana ny ITIL ary mampiditra asa be dia be izay tokony atao amin'ny fomba mahomby mba hampitaovana ny zavatra takian'ny mpanjifa amin'ny asa iray.
Ny fitantanana ny fitantanana ny zava-mitranga, ny fitantanana ny loza amin'ny fikarakarana ny loza amin'ny loza sy ny lafiny ara-teknika amin'ny asa iray dia azo antoka eo ambanin'ny fizotran'ny asa fanompoana.
Ny tanjon'ity singa ity dia ny fanamafisana ny fangataham-pandraiketan'ny mpanjifa amin'ny fomba mahomby, ny fanelingelenana ny serivisy dia efa voafaritra amin'ny fotoana ary ny fikolokoloana dia atao avy hatrany na olana ara-teknika. Ny mpanome tolotra dia miandraikitra ny fiantohana ny fampitaovana ny serivisy mahomby sy ara-dalàna. Ny ampahany samihafa ao amin'ny serasera ITIL Core dia misy,
Fitantanana ny zava-nitranga
Zava-dehibe ny fahafaham-po
Ny fitantanana ny olana
Fifehezana ny paikady
Fitantanana ny birao
Ny hevitra mitondra fiara CSI dia tena manan-danja. Ny fikambanana tsirairay dia mila mahazo tombontsoa avy amin'izy ireo ary mamorona amin'ny toetra maha-izy azy ireo. Ny fampahalalana sy ny fahitana avy amin'ny lasa dia hampiasaina hamoronana fomba fanao ho an'ny fikambanana handraisana azy.
Ny fampandrosoana ny tolotra maharitra dia mitarika fomba vaovao, manatanteraka fomba tsara kokoa hampihenana ny tombantombana sy ny mason-tsivana amin'ny fitazonana sy fanampiana ny mpanjifa vaovao. Ny fandrosoana sy hevitra hafa mifandraika amin'ny CSI dia,
Fandinihana ny fisian'ny CSI
Ny fanamarinana ITIL dia fanadihadiana sarotra ho an'ireo vao tonga vao haingana ho an'ny fahaiza-manao mahomby izay niasa tamin'ny orinasa IT nandritra ny fotoana lava be dia mety hahita ireo hevitra izay tsy dia takatry ny fahatakarana. Ireo no singa fototra sy sokajy samihafa mifandraika amin'ny ITIL. Fihetseham-po mahavaky anao izay hanome anao ny fanamarinana momba izany alohan'ny hanehoanao ny fanadinana mba hampitsaharana ny fahaiza-manaonao. Ny fahatanterahana mahomby dia hiankin-doha amin'ny mpitantana tsara kokoa sy marika mba hanomezana anao ny fikambanana.
Fanomanana ny fanadinana ITIL Foundation | FITSIPIKA MISY FREE ITIL Mock for Practice